पीसी विन्डो को लागी FACETIME डाउनलोड गर्नुहोस् 7, 8 & विन्डो 10
नमस्कार फेसटाइम प्रेमी! तपाईंले आफ्नो विन्डो पीसी मा फेसटाइम स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ कसरी भ्रमित छन् विन्डोजको लागि फेसटाइम 7, विन्डोजको लागि फेसटाइम 8, वा डाउनलोड गर्न र स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ तापनि आफ्नो सञ्झ्यालमा फेसटाइम 10 अपरेटिङ सिस्टम त्यसपछि यो लेख पालना?
पीसी लागि फेसटाइम डाउनलोड
तपाईं कम्प्युटरमा फेसटाइम गर्न सक्नुहुन्छ
पीसी डाउनलोड लागि फेसटाइम
यहाँ यस लेखमा, म केही सरल सुझाव र चाल तपाईं विन्डो मंच मा काम गर्न आफ्नो मनपर्ने अनुप्रयोग फेसटाइम प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ जो दिनुभएको छ.
यदि तपाइँ विन्डोज ल्यापटप प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र चाहनुहुन्छ भने Windows को लागि डाउनलोड फेसटाइम7ल्यापटपहरू त्यसपछि यो लेखमा समेटिएको प्रत्येक र सबै तलको दिइएको छ जो सरल प्रक्रिया निम्नानुसार.
द्वारा एप्पल इंक फेसटाइम. सबैभन्दा अन्तरक्रियात्मक मध्ये एक छ, उपयोगी, र अन्तिम भिडियोटेलफोनी सफ्टवेयर जसले सम्पूर्ण विश्वलाई प्रभाव पारेको छ. यो डिजिटल युग मा, हरेक व्यक्ति अरूसित सामाजिक जोडिएको रहनुहोस् चाहन्छ.
अंकित समय मद्दत संग, तपाईं चाखलाग्दो दुवै भिडियो गर्न सक्छन् र अडियो आफ्नो वरपर संग अन्तरक्रियात्मक रहन भनिएको छ. समय को खण्ड संग, एप्पल उपकरण प्रयोगकर्ताहरूमा फेसटाइम अनुप्रयोगको प्रयोग एकदम बृद्धि भएको छ.
यो अनुप्रयोग अरूबाट प्रतिस्पर्धी छ यो भन्दा उच्च गुणस्तरको भिडियो र अडियो कल सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ रूपमा. अनुसन्धान अनुसार, अधिकांश मानिसहरू आईप्याड सहित एप्पल उपकरणहरू भएको, आईफोन, म्याक, र आइपड फेसटाइम आफ्नो व्यक्तिगत र कर्पोरेट संसारको साथ सम्पर्कमा रहन प्रयोग गर्दै.
सुरुमा, अनुहार समय विशेष एप्पल उपकरणहरू लागि डिजाइन भएको थियो. तर कारण यसको कुशल प्रदर्शन र माग गर्न, अब तपाईं पनि पीसी लागि फेसटाइम डाउनलोड गर्न सक्छन्. कि रोचक छैन? संचार विधि अब पूर्ण परिवर्तन भएको छ.
मान्छे थप भिडियो र अडियो भन्दा कल ई-मेलहरू वा मेलहरू गर्न रुचि. तथ्य समय को यो स्मार्ट अनुप्रयोगको मद्दतले, तपाईं सजिलै कुरा वा विश्वभरिका कहीं बसिरहेका जो कोहीले हेर्न सक्छन्.
अमेरिकी र बेलायत जस्ता केही देशहरूमा, धेरै व्यक्तिहरूले एप्पल उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेका छन् जसले तिनीहरूलाई अन्य एप्पल उपकरण प्रयोगकर्ताहरूसँग जोडिएको रहनको लागि उपयोगी बनाउँदछ.
तर केही देशहरूमा, उपभोक्ताहरु आफ्नो दैनिक डिजिटल गतिविधिहरु लागि पीसी प्रयोग गर्न रुचि. त्यसैले यस्तो प्रयोगकर्ताका लागि सजिलो ल्याउन, यस लेखमा कसरी कुशलतापूर्वक आफ्नो व्यक्तिगत कम्प्युटर मा iOS अनुप्रयोग प्रयोग गर्न मार्गदर्शन हुनेछ. यो फरक एप्पल उपकरणहरू प्रयोग भएका अन्य मानिसहरू जडान गर्न सक्षम.
तपाईं डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसैले यो लेख पढ्दा राख्न, स्थापना र आफ्नो व्यक्तिगत कम्प्युटर मा तथ्य समय को implausible अनुप्रयोग चलाउन.
1 डाउनलोड र फेसटाइम अनुप्रयोग स्थापना पीसी लागि:
2 कसरी डाउनलोड र पीसी लागि फेसटाइम स्थापना गर्न?
2.2 आफ्नो पीसी मा फेसटाइम अनुप्रयोग को सुविधाहरू:
डाउनलोड र फेसटाइम अनुप्रयोग स्थापना पीसी लागि:
सामान्यतया, स्याउ सबै उपकरणहरू आईफोनहरु लगायत फेसटाइम एक मा निर्मित अनुप्रयोग छ, आइपड, iPads, र म्याक. तर तपाईंले आफ्नो पीसी मा यो विकल्प प्राप्त गर्न सक्दैन. यस उद्देश्यका लागि, तपाईं एक emulator प्रयोग गरेर अंकित समय स्थापना गर्न. यो डाउनलोड प्रक्रिया निम्न कदम गले:
पहिले, तपाईं डाउनलोड गर्नुपर्छ iPadain emulator. तपाईं दिइएको लिंक को प्रयोग गरेर यसलाई सक्छ: ipadian.net
को iPadian emulator डाउनलोड पछि, खुला यसको फाइल र स्थापना दिइएको आवश्यकताहरु र निर्देशन अनुसार यसलाई.
त्यसपछि, एक पटक आफ्नो iPadian emulator स्थापित छ, तपाईं अहिले खोल्न सक्छ र लग - इन आवश्यक जानकारी प्रदान गरेर. यो चरण आफ्नो आवश्यकता स्याउ आईडी र पासवर्ड.
अब तपाईं आफ्नो फेसटाइम अनुप्रयोग हुन सक्छ. तर तपाईं यो त पाउन सक्छन् मामला मा तपाईं सजिलै एप्पल App स्टोर कार्यक्रम को सहायता संग डाउनलोड गर्न सक्छन्.
अन्ततः, यसको इमेल प्रयोग गरेर एप्पल संसारको कुनै पनि सम्पर्क गर्नुहोस्, प्रयोगकर्ता आईडी वा एक नम्बर र अडियो वा भिडियो कलहरू सुरु. तपाईं अनुप्रयोगमा दिएको भिडियो वा telephonic प्रतिमा क्लिक गरेर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ.
कसरी डाउनलोड र पीसी लागि फेसटाइम स्थापना गर्न?
छ केही सरल कदम निम्न निम्नानुसार आफ्नो पीसी मा फेसटाइम प्रयोग गर्न अर्को विकल्प:
PC मा फेसटाइम डाउनलोड पछि सम्भव छ Bluestacks आफ्नो मा पीसी.
पछि Bluestacks डाउनलोड, यो स्थापना र एक पटक डाउनलोड पूरा, फेरि शुरु गर्नु आफ्नो पीसी.
प्ले स्टोर खोल्ने पछि, खोज र प्रकार मा क्लिक फेसटाइम र त्यसपछि Windows PC लागि फेसटाइम डाउनलोड.
तुरुन्तै फेसटाइम स्थापना गर्न, खुला वा रन क्लिक, र त्यसपछि आफ्नो स्क्रिन निर्देशनहरू पालना. *तपाईं प्रशासक पासवर्ड वा पुष्टि लागि संकेत गर्दै हुनुहुन्छ भने, पासवर्ड टाइप वा पुष्टि प्रदान.
को फेसटाइम स्थापना गर्ने, बचत क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि आफ्नो कम्प्युटरमा स्थापना फाइल डाउनलोड. तपाईं फेसटाइम स्थापना गर्न तयार हुँदा, फाइल डबल-क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि आफ्नो स्क्रिन निर्देशनहरू पालना. *तपाईं अगाडि बढ्न अघि तपाईँलाई भाइरस लागि स्थापना फाइल स्क्यान गर्न सक्छन् किनभने यो एक सुरक्षित विकल्प हो.
कसरी तपाईंको पीसी मा अंकित समय प्रयोग गर्न?
आफ्नो पीसी मा अंकित समय आफ्नो मनपर्ने अनुप्रयोग स्थापना पछि, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न मूल कुराहरू कदम पालना गर्नुपर्छ:
आफ्नो पीसी मा फेसटाइम अनुप्रयोग को सुविधाहरू:
यो उल्लेखनीय videotelephony अनुप्रयोग धेरै लाभ छ र यसलाई आफ्नो ग्राहकहरु गर्न उल्लेखनीय परिणाम प्रदान गर्दछ. यसको रोचक सुविधाहरू छन्:
उच्च गुणस्तरको भिडियो कल
यो अनुप्रयोग विशेष भिडियो कल लागि डिजाइन गरिएको छ. आधारभूत विचार मान्छे जडान बनाउन र तिनीहरूलाई नजिकको भिडियो आवेदन मद्दत संग बनाउन छ.
यो सफ्टवेयर ध्यान डिजाइन गरिएको छ तपाईं भिडियो कलको लागि उच्च गुणस्तरीय रिजोल्युसन आनन्द उठाउन सक्छौं भनेर. राम्रो समाचार अंकित समय अब ​​व्यक्तिगत कम्प्युटर मा 1080 समर्थन छ छ. यदि तपाइँ फेसटाइममा तपाइँको स्क्रिन साझेदारी गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँ यस पोष्टलाई जाँच गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको लागि विवरण गाइड दिन्छ फेसटाइममा स्क्रिन साझा गर्नुहोस्.
यो रमाइलो गर्न, तपाईंको सिस्टम मा निर्मित क्यामेरा हुनुपर्छ. र तपाईं क्यामेरा छैन मामला मा त तपाईं एक वेब क्यामेरा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ.
अनुहार समय पनि वाइडस्क्रिन प्रदान गर्दछ 16:9 पक्षहरू. तपाईं अन्य प्रयोगकर्ताहरू जडान गर्न चाहनुहुन्छ जब यो एक उत्कृष्ट कल अनुभव प्रदान गर्दछ.
कारण यसको गुणस्तर र प्रभावकारिता गर्न, आफ्नो प्रतियोगिहरु दूत सहित तुलनामा यो अनुप्रयोग सबै भन्दा राम्रो रूपमा मानिन्छ, स्काइप, गुगल जोडी र धेरै.
राम्रो अडियो कल:
एक असाधारण भिडियो कल सुविधा बाहेक, तपाईं पनि अडियो कल विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. यो पनि दूरी बाबजुद अत्यन्तै राम्रो आवाज गुणस्तर छ
तस्वीर विशेषता मा भएको चित्र:
यो तपाईं आफ्नो कल संग व्यस्त हुँदा तपाईं छेउमा आफ्नो सानो तस्वीर प्रदर्शन गरेर राम्रो गर्न मद्दत गर्छ.
प्रयोगकर्ता- मैत्री इन्टरफेस
आफ्नो पीसी मा फेसटाइम अर्को प्रतिस्पर्धी लाभ छ, यो एक उत्कृष्ट प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्टरफेस छ. यो यति सरल छ, चिल्लो, र सजिलो. जो कोहीले प्रयोग र धेरै उचित यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ. यो भन्दा प्रयोगकर्ता एप्पल द्वारा फेसटाइम अनुप्रयोग प्रेम पूर्ण छन् कि कारण छ.
आफ्नो गोपनीयता र सुरक्षाको लागि, तपाईं कुनै पनि सम्पर्क ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ. जो कोहीले teasing वा तपाईं परेशान छ भने, तपाईं के गर्न छ सबै ब्लक-सूचीमा आफ्नो नाम प्रविष्ट गरेर व्यक्तिको ब्लक गर्न छ
यस्का साथसाथै, अनुहार समय पनि अन्य आकर्षक सुविधाहरू प्रदान
• तपाईं सजिलै सिर्फ आफ्नो एप्पल आईडी वा फोन नम्बर प्रयोग गरेर तपाईंको इच्छित सम्पर्क गर्न पुग्न सक्छ.
• तपाईं फेसटाइम मार्फत समूह कल आनन्द उठाउन सक्छौं. चाखलाग्दो कुरा, यो अनुप्रयोग तपाईं गर्न जडान गर्न सक्षम 32 सँगै प्रयोगकर्ता
• मजा र अन्तरक्रियात्मक कुराकानी गर्न, तपाईं स्टिकर र Animoji प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
• भिडियो कल समयमा, तपाईं दुई तरिकामा आफ्नो क्यामेरा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईं पीसी को एक अगाडि क्यामेरा प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई आफ्नो अनुहार देखाउन सक्छ वा
तपाईं आफ्नो मित्र तपाईं हेर्दै छन् के हेर्न दिनु क्यामेरा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ फिर्ता
• चाँडै तपाईँको प्रियजनहरूलाई सम्पर्कमा प्राप्त गर्न, तपाईं पसंदीदा को आफ्नो सूची बनाउन सक्छ.
• तपाईंले कि त वाइफाइ वा आफ्नो डाटा जडान द्वारा अंकित समय आनन्द उठाउन सक्छौं
• तपाईं आफ्नो प्राथमिकता निर्भर गर्दछ यो अनुप्रयोग विभिन्न भाषामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
म लेख तपाईं आफ्नो पीसी मा फेसटाइम प्रयोग गर्न आवश्यक सबै विवरण पूरा भएको छ भन्ने आशा. तपाईं कुनै प्रश्न छ भने, टिप्पणी बक्समा उल्लेख गर्छन्. म तपाईंको प्रश्नको उत्तर दिनेछु र तपाईंको प्रश्नहरूको समाधान गर्नेछु.
पीसी को लागी पोडकास्ट एडिक्ट [विन्डोज 10, 8,7र म्याक]